Zidane ‘Ma Hubo Inaan Sii Ahaanayo Tababaraha Real Madrid’ | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Zidane ‘Ma Hubo Inaan Sii Ahaanayo Tababaraha Real Madrid’
Sabtida ayay Real Madrid garoonkeeda Bernabeu kusoo dhowayn doontaa kooxda ay colaadda weyni ka dhexayso ee Atletico Madrid, halkaas oo Zidane uu ku khasban yahay inuu guul kala hoydo si uu kaalinta koowaad ee horyaalka usii fadhiyo.
Zidane oo shir jaraa’id ku qabtay Madrid, ayaa waxa uu sheegay in shaqadiisa Real Madrid aanu u haysanin hubanti inuu sii joogayo xili ciyaareedka dambe, haddii uu guulo ka gaadhi waayo xili ciyaareedkan.
“Shaqadayda inaan xili ciyaareedka dambe sii joogayo halkan lama hubo, taas daraadeed wax walba waan isku diyaarinayaa.” sidaas ayuu yidhi Zidane oo xili ciyaareedkii hore kooxda u qaaday koobka Champions League, kaalinta labaadna ka galay horyaalka LaLiga iyadoo uu xili dambe kooxda kala wareegay Benitez.
“Waan garanayaa qiimaha ay leedahay in tababare loo ahaado Real Madrid, sidaas daraadeed kama fikirayo kulanka soo socda oo kaliya, waayo ma garanayo waxa dhacaya mustaqbalka” ayuu raaciyey.
Siyaasadda Zidane uu kooxda ku hago, waxa udub-dhexaad u ah inuu ciyaaryahannada isku bedbeddelo oo uu marba qaar fadhiisiyo, toddobaadkana waxa uu waajahayaa laba ciyaarood oo adag oo kala ah Madrid derby iyo is-aragga koowaad ee tartanka Champions League ee Bayern Munich.
“Sagaal ciyaarood ayaa noo hadhay, dhamaan ciyaaryahannaduna muhiim ayay noo yihiin. Kaliya maaha BBC. Marka kasta way igu adag tahay xulashada kooxdu, waanaynu eegi doonaa siday wax ahaadaan illaa dhamaadka xili ciyaareedka.” sidaas ayuu yidhi Zidane.
Isagoo ka hadlaya kulanka Atletico, waxa uu yidhi: “Ma ahaan doonto ciyaar fudud, laakiin nama khusayso siday Atletico u ciyaarayso, waxa kaliya ee aan xiisaynayaa kooxday iyo waxay doonayso inay samayso.”